निर्देशक आलोक नेम्वाङको शव श्रद्धाञ्जलीको लागि प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा | EuropeNepal.Net
निर्देशक आलोक नेम्वाङको शव श्रद्धाञ्जलीको लागि प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा
00Europe Nepal Friday, November 7, 2014
The dead body of Late Alok Nembang in Pragya Pratisthan, Kamaladi for the final tribute. So there are so many supporters who have reached to haveaglance of their beloved Alok.
निर्देशक आलोक नेम्वाङको शव श्रद्धाञ्जलीको लागि प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा राखिएको छ ।
हिजो साँझ धापासीस्थित आफ्नै घरमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको उनको शव पोष्टमार्टमपछि श्रद्धाञ्जलीको लागि प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा राखिएको हो ।
दर्जनौं म्युजिक भिडियोको निर्देशन गरेका नेम्वाङको तेस्रो चलचित्र ’अझै पनि’ रिलिज हुने तयारीमा छ । उनले सानो संसार र कोही मेरो चलचित्रको निर्देशन गरेका थिए । दुई चलचित्रले आम दर्शकसम्म पुग्ने अवसर पाइसकेका थिए भने पछिल्लो चलचित्र अझै पनि रिलिज भएकै छैन ।
’लाखौँ पटक मैले कोसिस गरे’ बोलको नविन के भट्टराईको म्युजिक भिडियो निर्देशन गरेर यो क्षेत्रमा लागेका उनलाई नेपाली चलचित्रमा नयाँपन सुरुवाद गरेको व्यक्तिको रुपमा धेरैले लिने गरेका छन् । उनले नबिर्से तिमीलाई-नपाएँ तिमीलाई, पूरानो हुँदैन माया, डुब्न देउ लगाउत चर्चित भिडियो निर्देशन गरेका थिए ।
नेपाली सिनेमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने नेम्बाङले आफ्नो करियरको शुरुवात इमेज च्यानलमा कार्यक्रम प्रस्तोताका रुपमा गरेका थिए ।
एकान्तमा एक्लै बस्न रुचाउँने अनि हँसिलो उनी धापासीस्थित घरमा पनि एक्लै बस्दै आउका थिए ।
घटनाको अनुसन्धान भैरहेको प्रहरीले जनाएको बताएको छ ।
EuropeNepal.Net: निर्देशक आलोक नेम्वाङको शव श्रद्धाञ्जलीको लागि प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा